ANTSIRANANA : Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga
Tavela resabe aty Antsiranana, indrindra amin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra, ny fahitana ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana izay niverina nikatona indray. 16 octobre 2020
Araka ny fantatra dia noho ny resaka valanaretina coronavirus no antony nanakatonan’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sekoly ilay toeram-pianarana, mba hiarovana ireo kilonga madinika.
Mipetraka ny ahiahy amin’ireo ray aman-dreny kosa indray ny tranga misy, satria mifanandrify andro vitsivitsy nidiran’ny mpianatra, izay samy nahavita nandoa ny saram-pianarana, izao indray natsahatra nianatra ; ary azo heverina fa hitohy hatrany ny fandoavana ny ekolazy amin’ireo andro tsy nianarana ireo.
Ankoatra ireo sekoly izay nikatona tampoka ireo, noho ny antony fisian’ny mpampianatra voan’ny coronavirus ny sasany, ary ahitana mpianatra ihany koa ny hafa narary no nanakatonana ireo sekoly ireo ao anatin’ny 15 andro.
Ankoatra izany dia ahitana sekoly tsy miankina ihany koa no nizara ho vondrona roa ho an’ireo mpianatra isaky ny kilasy. Araka izany dia nozaraina ho vondrona roa ireo ankizy ao anaty kilasy iray. Ahitana izay mianatra ny maraina ary ny sasany mianatra folakandro. Hifandimbiasana tahaka izany isaky ny herinandro, izay nianatra maraina ireny dia miverina mianatra folakandro amin’ny herinandro manaraka.
Araka ny fanazavana voaray tamin’ny mpampianatra tamin’ity sekoly tsy mianatra nizarazara ny fampianarana ity ny alakamisy 15 oktobra teo, dia natao izany mba hialana amin’ny fifampikasohana amin’ireo ankizy maro hisorohana ny fihanaky ny valanaretina amin’ireo kilonga. Araka ny voalaza hatrany fa mbola tsy nahitana ankizy na mpampianatra voan’ny tsimokaretina, fa aleo misoroka toy izay mitsabo, mba tsy nanakatom-baravarana tahaka izay misy amin’ny toeram-pianarana hafa izay efa nikatona ireny.